AMISOM oo war rasmi ah ka soo saartay diyaaraddii lagu soo riday degmada Bardaale | Xaysimo
Home War AMISOM oo war rasmi ah ka soo saartay diyaaraddii lagu soo riday...
AMISOM oo war rasmi ah ka soo saartay diyaaraddii lagu soo riday degmada Bardaale
Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa looga hadlay diyaaraddii maalin ka hor ciidanka Itoobiya ee ka tirsan howlgalkaasi ay ku soo rideen degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Qoraalkan oo uu soo saaray madaxa guud ee ciidanka AMISOM, ahna wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Amb. Francisco Caetano Madeira ayaa lagu sheegay inay fududeyn doonaan baaritaanada socda, si loo cadeeyo duruufaha ku xeeran dhacdadaasi.
Warka ka soo baxay xafiiska Madeira ayaa sidoo kale lagu sheegay inay soo dhoweynayaan go’aanka ay gaareen hoggaamiyeyaasha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya.
“Diyaaradda ka tagtay Baydhabo, waxaa saarnaa lix qof, waxayna ku sii jeedeen Bardaale, oo 300 KM waqooyi galbeed kaga toosan Caasimadda Muqdisho, hawlgalka Midowga Afrika ayaa soo dhaweynaya go’aanka ay gaareen Hoggaamiye-yaasha Somaliya, Kenya iyo Itoobiya ee ku saabsan baaritaanka shilka.”